အကိတ်အန်တီမမ – Grab Love Story
ဖင်စီခံရောက်လုရောက်ခင် သောက်လက်စ စီးကရက်တိုကို ပစ်ချလိုက်ပြီး ရှေ့မှာရှိတဲ့ ဆေးလိပ်ပွဲထဲမှာ လက်ကျန်ရှိနေတဲ့ ရူဘီ တစ်လိပ်ကို ဆက်လက်မီးညှိလိုက်တယ် ” ရွှတ် ရွှတ် ညီလေးပိုက်ဆံရှင်းရအောင် ” လို့ခေါ်ပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ရှင်းလိုက်တယ်။ “ဘယ်လောက်ကျလည်း ညီ ” “လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ဆေးလိပ်သုံးပွဲ ဆိုတော့ ကိုးရာပါ အစ်ကို ” သူပြောမှ ကိုယ့်စာပွဲပေါ်က ဆေးလိပ်ပွဲတွေကို ကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်မှာပြီး ကိုယ်မေ့နေတာ စိတ်နဲ့လူလည်း မကပ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်က စိတ်တအားညစ်ရင် ဆေးလိပ်ကို အဲ့လိုတစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ကိုးလိပ် ဆယ်လိပ်သောက်တဲ့အကျင့်က ဖြစ်နေတာ။ စိတ်ညစ်မယ်ဆိုလည်း ညစ်စရာပါ။ ကိုယ့်ကို အမေလိုတစ်မျိုး အစ်မလိုတစ်ဖုံချစ်တဲ့ အန်တီမိုး ဆိုတဲ့ အိမ်နီးချင်း အန်တီကို ပစ်မှာစော်ကားမိတဲ့ အဖြစ်ပါဗျာ။ ပစ်မှားမယ်ဆိုလည်း ပစ်မှာချင်စရာပါ။ အန်တီမိုးလို့ ခေါ်တာကလည်း သူနဲ့က အတွင်းသိ အဆင်းသိမို့ ခေါ်ဖြစ်ချင်းပါ။
ကျွန်တော်က သူ့လက်ပေါ်မှာ အရွယ်ရောက်တယ် လို့ဆိုရမယ်။ အခု ကျွန်တော့်အသက်က ဆယ့်ရှစ်နှစ် ရှိပြီ။ အန်တီမိုး အသက်က သုံးဆယ့်လေး နှစ်ရှိပြီ။ မသိတဲ့သူဆို နှစ်ဆယ့်ငါး နှစ်၊ နှစ်ဆယ့်ခြောက် နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးသလိုကို နုတာ။ အရပ်က မနိမ့်မမြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ အတန်အသင့် အရပ်လို့ပြောရမှာပါ။ အသားအရည်က အဖြူထဲ မပါပေမယ့် ခပ်လတ်လတ်လို့ပြောရမယ်။ နှာတံကဆင်းဆင်း နှာတံဆင်းဆိုသူက ကုလားမပေါ့။ မျက်လုံးက ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ အလွန်လှတဲ့သူပေါ့ ညိုချောပေါ့ဗျာ။ သူမရဲ့ နို့လေးတွေက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်နဲ့ မြင်လိုက်တာနဲ့တင် ညှစ်ချင်စရာလေး သူမကို မြင်သူတကာ ငေးမောရမယ့် အားသာချက်တစ်ခုက သူမရဲ့ အိုးကြီးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်အခေါ် ကိတ်တာပေါ့။ ကိတ်တာတော့ တော်တော် ကိတ်တယ်ဗျ။ ကဲ အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ ဖြစ်ပျက်ပုံက ဒီလိုပါ။ သူအိမ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အိမ်က တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ် စားအိမ်သောက်အိမ် ဖြစ်နေတာကြာပြီ။
ကျွန်တော်တို့မိသားစု မန္တလေးကို စပြောင်းလာတော့ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်အသက် ၁၀နှစ်လောက်မှာ စပြောင်းလာတာ။ ကျွန်တော့်မိသားစုကလည်း အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေရယ် အမေရယ် ကျွန်တော်ရယ်မှ မိသားစုက သုံးယောက်ပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်က တစ်ဦးတည်းသောသား အဖေက ကုန်တင်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာပေါ့။ အဖေက နယ်ထွက်ပြီး ကားမောင်းနေရတာ များတယ်။ တစ်လမှ သုံးရက်လောက်ပဲ အိမ်မှာနေရတာလေ။ အမေကလည်း ဈေးတစ်ခုမှာ ကုန်စိမ်းရောင်းတဲ့ ကုန်စိမ်းသည်ဆိုတော့ အိမ်နဲ့ဈေး ဈေးနဲ့အိမ် ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စားအိမ်သောက်အိမ်က အိမ်နီးနားချင်းအိမ်ဖြစ်တဲ့ အန်တီမိုး တို့အိမ်ပဲ ဆိုပါတော့ အန်တီမိုး အိမ်မှာကလည်း အန်တီမိုးရယ် သူ့ရဲ့အမေရယ်ပဲ ရှိတာဗျ။ အဲ့တော့ သူတို့လည်း အဖော်လိုနေတာနဲ့ ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့။ အန်တီမိုးရဲ့အမေကတော့ ကျွန်တော် ကိုးတန်းရောက်တော့ ဆုံးသွားတယ်လေ။
အဲ့ဒီကတည်းက ကျွန်တော် အန်တီမိုးအိမ်မှာပဲ အိပ်ဖြစ်တာများတယ်။ အဖော်မရှိလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုထဲပါပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြောတာများပြီးလိုရင်း မရောက်ပဲ ဖြစ်နေတော့မယ်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံက ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်ကျူရှင်ကနေ အစောကြီး ပြန်လာတဲ့နေ့မှာ စဖြစ်တာပဲ။ ကျူရှင်ဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ်။ ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ကျလို့ အခုဟာက သုံးနှစ်မြောက် ကျူရှင် တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲ့လို ကျူရှင်က တစ်ချိန်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ပေါ့။ ဆရာမ နေမကောင်းလို့, လို့ပြောတာပဲ။ အိမ်ကိုရောက်တော့ ဗိုက်ကလည်းဆာနေတာနဲ့ အန်တီမိုး ဘာတွေများချက်ထားလည်းဆိုပြီး မီးဖိုချောင်ကို ဝင်ရှာကြည့်လိုက်တယ်။ စားစရာဘာမှ မတွေ့တာနဲ့ အန်တီမိုးကို မေးမယ်ဆိုပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲမှာ တစ်ခုခု လုပ်နေလားဆိုပြီး တွေးရင်းနဲ့ သူ့အိပ်ခန်းဘက်ကို လျှောက်လာလိုက်တယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အော်ခေါ်ရင်းနဲ့ … ” အန်တီမိုး ရေ အန်တီမိုး စားစရာ ဘာတွေရှိသေးလည်း “။
ပြောရင်းနဲ့ သူ့အခန်းရှေ့အရောက်မှာ အိပ်ခန်းတံခါးက ခပ်ဟဟ လေးဖြစ်နေတာနဲ့ အခန်းထဲကို အမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးပြီး ကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုလည်း ကြည့်ချင်စရာဖြစ်နေတာပါ။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်လေးကို ဝတ်ပြီး အိပ်နေတာ ဒီအတိုင်းဆို အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် အခန်းတံခါးကို ကျောပေးပြီး ဘေးတစောင်းလေးအိပ်နေတာ ဂါဝန်လေးကလည်း တင်ပဆုံလောက်ထိ လန်နေတော့ အန်တီမိုးရဲ့ အမွှေးရေးရေးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်နေရတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကလည်း တောင်လာတယ်။ ဘေးတစောင်းအိပ်နေတော့ နဂိုကမှ အိုးကောင်းပါတယ်ဆိုမှ စောက်ဖုတ်ကြီးကို နောက်လန်ပစ်ပြီး လာလိုးလှည့်ပါလို့ ခေါ်နေသလိုလိုပါပဲ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ တံထွေးတစ်ချပ်ကို ကွတ်ကနဲ့မြည်အောင် မျိုချလိုက်ရင်း ပြေးပြီးလိုးချင်နေတဲ့စိတ်ကို မနည်းထိန်းချုပ်ထားရတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ အဒေါ်ရင်းလိုပါပဲလားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပြေးပြီး လိုးချင်တဲ့စိတ်က ဒွန်တွဲနေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း သြော် သြော် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ တံထွေးကို မျိုချရင်း နောက်ပြန်လှည့်ပြီး တံခါးကိုပိတ် မီးဖိုချောင်နဲ့ အခန်းတံခါး အလယ်လောက် ကနေပဲ အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ။ ” အန်တီမိုးရေ အန်တီမိုး သားဗိုက်ဆာလို့ ” ” အင်းးးး ဟင် သား အာကာ လား လာပြီ လာပြီ သားရေ ” ဆိုတဲ့ အသံလေးပြုရင်းနဲ့ ကဗျာကယာနဲ့ ထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ လူက အိပ်ချင်မှုးတူးရုပ် ဆံပင်လေးက ကပိုကရိုနဲ့ အိမ်နေရင်းဆိုတော့ ဘောလီမပါပဲ ညဝတ်ဂါဝန်လေးနဲ့ ဆိုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးက ရေးရေးလေး ထွက်နေသယောင်နဲ့ဆိုတော့ စောနက အရှိန်နဲ့ပေါင်းပြီး လီးကပြန်တောင်လာတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ အောက်ခံဘောင်းဘီပါလို့ နို့မို့ဆို မလွယ်ပါ။ ” သား အာကာ ဒီနေ့ကျူရှင်က စောလှချည်လား ဒါမှမဟုတ် မင်းကျူရှင် လစ်လာတာလား ဟင် အာကာ ” ” မဟုတ်ပါဘူး အန်တီမိုး ဒီနေ့ တစ်ချိန်နားလို့ စောစော ပြန်လာတာပါ သားကျူရှင် မလစ်ပါဘူး ” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် စကားကိုလည်း ထိန်းပြီးပြောနေရတယ်။
မျက်လွှာကို အောက်ချပြီးပေါ့။ မချလို့လည်းမဖြစ် တော်ကြာ မျက်နာပျက်နေတာ ရိပ်မိသွားမှာ ဆိုးလို့ပါ။ အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အန်တီမိုး အပေါ်မှာ မရိုးသားတော့ပါဘူး။ လိုးချင်စိတ်က များနေခဲ့တယ်။ လိုးခွင့်ရအောင်လည်း အမျိုးကြံနေတာပေါ့ဗျာ။ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ဒါပဲဗျာ။ အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်လွန်လား မှားလားဗျာ။ ဒီနေ့လည်း ကျူရှင်ပိတ်လို့ မနက်စာစားပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လာထိုင်နေတာ ထိုင်နေတာက သုံးနာရီကျော် ရှိပြီဆိုတော့ ပြန်ရတော့မယ်။ စိတ်ကလည်း အန်တီမိုးကို ဘယ်လိုလုံးပြီး လိုးခွင့်ရမလဲ ဆိုတာပဲ တွေးနေတာ တွေးနေရင်း လက်ကျန်စီးကရက်တိုကို တစ်ချက်ဖွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနေ ပြန်လာပြီး ကုန်မာဆိုင်ကိုဝင် ရူဘီ တစ်ဘူးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ” အန်တီမိုး … အန်တီမိုး ” ရေချိုးခန်းထဲက ရေသံကြားမှ….. ” အော်…ရေချိုးနေတာနဲ့တူတယ် ” ကျွန်တော်လည်း အန်တီမိုးရေချိုးနေလို့ ဆက်မခေါ်မိတော့ပဲ။
ဧည့်ခန်းမှာပဲ သတင်းဖတ်ရင်း ဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ် … ” ကျွီ … သား အာကာ မင်းတစ်မနက်လုံး ဘယ်တွေ လျှောက်သွားနေတာလည်း ဟင် အာကာ ” ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်သည် ။ ” ဗျာ……အန်တီမိုး ” ” သား ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေတာလဲလို့ မေးနေတာ” ကျွန်တော် ချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘဲ မျက်လုံးများပြူး၍ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် ရပ်နေသော အန်တီမိုးတစ်ကိုယ်လုံးမှာ ရင်လျားထားသော ထဘီပါးပါးတစ်ကွင်းသာပါတယ်။ ရေချိုးထားလို့ ကိုယ်လုံးမှာရေစိုနေတော့ ထဘီနှင့်အသားမှာ ကပ်နေတယ်။ ဆံပင်ပေါ်မှ ရေစက်ကလေးများကလည်း ဖြူဖွေးမို့မောက်သော နို့အုံကြီးနှစ်ခုကြားသို့ တစ်စက်စက် စီးနေသည်မှာ ကျွန်တော်လို ဆယ်ကျော်သက်ပိုးထခါစ အရွယ်မပြောနဲ့ မြင်သူတကာတောင် စိတ်ထိန်း၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်.. ထဘီခြားမှ ထိုးထွက်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးများမှာလည်း မြင်သူတကာ စို့ချင်အောင် စူထွက်နေတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အန်တီမိုး မျက်နှာကို မမြင်တော့ပါဘူး နို့အုံဖွေးဖွေးလေးနဲ့ စူထွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေး များကို သာစိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။ ” ဟဲ့ သား… ” ” အန်တီ မေးနေတယ်လေ ” ” အာ …ဟိုဟာ…ဘယ်မှ မသွားပါဘူး သား လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေတာပါ ” ” သား နော် အသက်ကဖြင့် ဘာမှ မရှိသေးဘူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာနဲ့ ဆေးလိပ်လေး သောက်ရတာနဲ့နော် ဟင်း ဟင်းးးး ” မျက်နှာကျောလေးတင်းပြီး မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ပြောရင်း အန်တီမိုးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ အန်တီမိုး လမ်းလျှောက်တာကို ငေးကြည့်နေခဲ့တယ်။ အန်တီးမိုး ဖင်ကြီးက စူကောက်နေပြီး ရေစိုထားတာကြောင့် ဖင်အောက်က အရစ်ကြီးတွေက ထင်ရှားနေတယ်။ ဖင်ကြီးမှာလည်း ကိတ်တာကြောင့် ဖင်ကြားထဲမှာ ထဘီကညက်နေသေးတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ပြေးပြီးသာ စောင့်လိုးနေမိတော့တယ်။ လီးကလည်း တာင်လာတော့ အန်တီမိုးရဲ့ ဖင်ကြီးကို ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အိမ်သာထဲကိုသွား ဖုန်းထဲက အန်တီမိုးဖင်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ဂွင်း ထုပစ်လိုက်တယ်။ ထုပြီးသွားတော့မှ ဧည့်ခန်းမှာ ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ အန်တီမိုးကလည်း ကျွန်တော် အမူအရာတွေပျက်နေတာကို သတိထားမိတယ် ထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတုန်း အန်တီမိုး သူ့အခန်းထဲကနေ အဝတ်အစားလဲပြီး ဧည့်ခန်းကိုထွက်လာတယ်။ အားပါးပါး လှလိုက်တာဗျာ။ အစိမ်းရောင်ရေညှိ အကွက်တွေနဲ့ ခပ်ပါးပါးအင်္ကျီကိုဝတ်ထားတာတော့ အင်္ကျီအောက်က အနီရောင်ဘော်လီကို ထင်းထင်းကြီး မြင်နေရတယ်။ ထဘီကလည်း အစိမ်းရောင်နုနုအအိသားကို ဝတ်ထားပြန်တော့ ကောက်ချိတ်နေတဲ့ ဖင်ကြီးက နုအိပြီးရမ်းခါနေတာပေါ့။ အသားအရေက ခပ်လတ်လတ် အရပ်က မနိမ့်မမြင့်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဆိုတော့ မြင်ရတဲ့ ပုထုဇဉ် ယောကျာင်္းသားတွေ လီးမတောင် ဘာခံနိုင်ရိုးလဲ။ အခန်းပြင်ရောက်မှ ဒေါက်ဖိနပ်ကို ကုန်းပြီးစီးလိုက်တော့ နို့အုံကြီးတွေကအောက်ကို တွဲကျလာတယ်။
နို့အုံကြီးကြားထဲကို ကျွန်တော့်လီးနဲ့တာ ပြေးပြီး လိုးချင်နေမိတယ်။ ဖွပြီးကောက်ထားတဲ့ ဆံပင်တွေကိုလည်း ကျွန်တော့် လီးကို အယားပြေ ပွတ်ချင်နေမိတယ်။ အန်တီမိုးက လူကသာ အသက်ကြီးတာ စိတ်ကတော့ မအိုသေးဘူး။ အဝတ်အစားဝတ်တာကို စမတ်ကျကျ ချပ်ချပ်ကပ်ကပ် ဝတ်တတ်တယ်။ ” သား … ထမင်းစားရအောင် “ဟုတ် အန်တီမိုး ထမင်းက သိပ်ပြီးစာလှတယ်မဟုတ် အန်တီမိုးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အနီးကပ်ထပ်ပြီး ကြည့်ချင်နေတာကြောင့်ပါ။သား … အာကာ ဟင်းတွေထည့်စားလေ ပြောလည်းပြော ဟင်းကိုလည်း ထမင်းပန်းကန်ထဲ ထည့်ပေးရင်းပေါ့။ ” ဟုတ် … အန်တီမိုး ကန်တော့နော် ” ” အမလေးဟယ် ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြား ပြီးတော့သားကို တစ်ခုပြောရအုံးမယ်။ သားက အရွယ်မရောက်သေးဘူး ဘာညာဘာညာတွေ အန်တီမိုး မကြားချင်ဘူးနော် ” ” သားက ဘာတွေလုပ်နေလို့လည်း ဗျ ” ဟင်း ဟင်းးးးး သားရဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေကို အန်တီမိုး လျှော်တာပါ။
မင်းဘာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိတယ် ကျွန်တော်လည်း သူ့စကားကို ဂရုမစိုက်နိုင်ပဲ သူ့ရဲ့ နို့အုံကြီးကိုပဲ ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ” ဟဲ့ အာကာ …သား ဘာကြည့်နေတာလဲ ” လို့ပြောမှ ကျွန်တော့် မျက်လုံးကို ထမင်းပန်းကန်ပေါ် လွှဲလိုက်ရတယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ကို လီးက တောင်နေသေးတယ်။ အန်တီမိုး ပန်းကန်တွေဆေးပြီးတော့ ပန်းကန်တွေကို ကြောင်အိမ်ထဲ ထည့်နေတယ်။ စားပွဲနဲ့ ကြာင်အိမ်ကလည်း ကပ်နေတာဆိုတော့ အန်တီမိုး ဖင်ကြီးနဲ့တင် ပြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထမင်းစားပြီး ရေသောက်ချင်တာနဲ့……. ” အန်တီမိုး နည်းနည်းလောက် ” အန်တီမိုးက ရှေ့ကိုကုန်းပြီး တိုးလိုက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဖင်လုံးကြီးက အပေါ်ကို ကော့တတ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စားပွဲကြားကို တိုးဝင်လိုက်ပြီး အိစက်ပြီး ကော့တက်နေတဲ့ အန်တီမိုး ဖင်ကို တောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးနဲ့ သွားထောက်လိုက်တယ်။
ဖင်ကြီးကလည်း တင်းတင်းလေးဆိုတော့ စက္ကန့်တော်တော်ကြာ ပွတ်နေမိတယ်။ ” အိုး… ရှီး …ကောင်းလိုက်တာ အန်တီမိုးရယ် ” ” အို့ ဟင့် … အင်း သားရယ် နွေးနေတာပဲ မင်းလီးက ” အန်တီမိုး ပြောလည်းပြော သူ့ဖင်ကြီးကို အပေါ်မြောက်လိုက် အောက်ချလိုက်နဲ့ ပွတ်နေတယ်။ တော်တော်လေးကြာတော့ ကျွန်တော့် လီးထပ်ကနေ အရည်လေးတွေ စို့လာတာကို သတိထားမိတယ်။ ” အာ့ … အာ … အိုးးးးးး စောင့်ပါအုံး သားရယ် ” ကျွန်တော်လည်း အန်တီမိုး ဆံပင်တွေ ခပ်ဖွဖွလေးဆွဲပြီး လက်တဖက်က ဖင်တွေကိုပွတ်နေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်ဆွဲထားတဲ့လက်ကို ဆံပင်ကနေဖယ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော် ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပုဆိုး ချွတ်လိုက်တော့ အန်တီမိုးက ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြီး သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်တော့် အောက်ခံဘောင်းဘီကြားထဲ လက်နိုက်ပြီး လီးကို အပေါ်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ” အန်တီမိုးရဲ့ အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးပါဦးကွယ် “။
ပြောလည်းပြော ဂွင်းတိုက်သလိုလေး လုပ်ပေးနေတော့…. အာ့ … အားးးး သား ပြီးတော့မှာ ” လို့ပြောလိုက်တယ်။ ကိုယ့်လီးကို ကိုင်ပြီး ထုတာနဲ့ ခုလို မိန်းမတစ်ယောက်က ကိုင်ပြီးလုပ်ပေးတာက မတူဘူးဗျ။ ခံလို့တော့ အရမ်းကောင်းတာဗျ။ ပြီးတော့ အန်တီမိုးက အပေါ်ကို လန်နေတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို အောက်ခံဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေပဲ သူ့သွားနဲ့မနာအောင် ခပ်ဖွဖွလေး ကိုက်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အန်တီမိုးရဲ့ ခေါင်းကိုဆွဲပြီး တအားကပ်ပြီး ညစ်ထားလိုက်တယ်။ ” အွတ် … ဟွတ် … အဟွတ် အဟွတ်………” သူလည်တွေတောင် နင်ပြီး ချောင်းတောင်ဆိုးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖီးတအားကောင်းလာတာနဲ့ အန်တီမိုးကို ခဏဖယ်ခိုင်းပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တယ်။ အန်တီမိုးလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကို ကြည့်နေရင်း သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လီးကို သူ့လက်နဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပြီး ကျွန်တော်ကို ဂွင်းထုပေးတယ်။
ကျွန်တော်က အန်တီမိုးရဲ့ မေးရိုးကို ညှစ်လိုက်တော့မှ ပါးစပ်လေး ဟသွားတာ အဲ့တော့မှ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို လီးထိပ်နဲ့ ပွတ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း အရှိန်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ ပြီးသွားတော့ သူ့ရဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုလုံး ကျွန်တော့် လီးရည်လေးပေပွကုန်တယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော်ခါးကို နောက်ဆုတ်အရှိန်ယူပြီး သူ့ပါးစပ်ကို တအားဆောင့်လိုးလိုက်တယ်။ ” အို့… အားးးး … ရှီးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ အန်တီမိုးရယ် ” အန်တီမိုး ပါးစပ်ထဲကို လီးတချောင်းလုံးဝင်သွားပြီး သူရဲ့ မျက်နှာကလည်း ကျွန်တော့်ပေါင်ရင်းသို့ကပ်သွားတယ်။ ” ဂွတ် … အွတ် … အဟွတ် အဟွတ် ” အန်တီမိုး ကျွန်တော့်လီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲက ထုတ်လိုက်တယ်။ သူလည်း မောမောနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ် ဖင်ချထိုင်တော့ နံရံကိုကျောမှီပြီး ခြေထောက်ကို ကားထားတော့ ဖုဖောင်းပြည့်မောက်နေတဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက အရည်တွေရွှဲလို့ ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တော့တာနဲ့။
အန်တီမိုးရဲ့ ပေါင်ကိုဖြဲလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နဲ့ကုန်းစုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့စောက်စေ့လေးကို သွားနဲ့မနာအောင် ဖွဖွလေး ထပ်ကိုက်လိုက်တော့ အန်တီမိုးလည်း ခါးလေးကော့လာပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ဆံပင်အုံကြီးတခုလုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ လွတ်သွားမှာစိုးသည့်အလား တအားဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်။ ” အင့် … အို့ … အားးးးး မခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာ အန်တီးမိုး တအားလိုချင်နေပြီ သားရယ် ” မပီမသနဲ့ပြောရင်း… “သား … ခြေထောက်ကိုဆင်းပြီး ထိုင်လိုက် ” ကျွန်တော်လည်း မှုတ်နေရာကရပ်လိုက်ပြီး ခြေဆင်း ထိုင်ပေးလိုက်တယ်။ အန်တီမိုးလည်း တော်တော်ခံချင်နေပုံ ရတယ်။ အငမ်းမရကို ဖြစ်လို့ပေါ့။ အန်တီမိုးလည်း ထိုင်နေရာထလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်လီးကို ကိုင်ပြီးမှ ကျွန်တော်အပေါ်ကနေခွထိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ လီးကိုတေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ကျွန်တော့်အပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ” အာ့ အို့ အင်းးးးး ” အာ့ အို့ အင်းးးးးး ” အန်တီမိုးကအပေါ်ကနေ အားစောင့်နေတော့။
ကျွန်တော်ကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး သူ့ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ခပ်ဖွဖွချေပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြူဖွေးပြီးအိစက်နေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကြားကို ခေါင်းဝင်ပြီး တအားရှုံ့နမ်းလိုက်တယ်။ သူကတော့ အဆောင့်မပျက်ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နို့ကြားကနေ ခေါင်းကို ဖယ်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ နို့သီးတလုံးကို ဖမ်းစုပ်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို အားထည့်ပြီး ကိုက်လိုက်တော့….. ” အာ့ … အို့ … သား အန်တီမိုး မရတော့ဘူးကွာ ” ” ဖတ် … ဖတ် … ဖွတ် … ဖွတ် … ဗြီးးးးးး ” ” အာ့ … အာ့ … အာ့ … ” အန်တီမိုး တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်သွားပြီး ကျွန်တော့် လီးကလည်း ပူနွေးနွေးအရသာကိုခံစားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်လည်း အောက်ကနေပြီး လက်နှစ်လုံးကို နောက်မှာ အားယူထောက်လိုက်ပြီး တအားပြန်ဆောင့်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲက သားအိမ်လေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ လရည်နွေးနွေးလေးတွေ ပြန်ပန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်။
အားးးး ကောင်းလိုက်တာ အန်တီမိုးရယ် ကုလားမ စောက်ဖုတ်လေးဆိုတော့ စည်းပြီး စေးနေတာပဲဗျာ။ အန်တီမိုးကလည်း မောမောနဲ့ ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို ဖက်းထားရင်းနဲ့ မှိန်းပြီး အမောဖြေနေတယ်။ သူကျွန်တော့်အပေါ်ကနေ ထပြီး ဆင်းမယ့်အလုပ် မဆင်းစေပဲ သူ့ကို ပြန်ဆွဲဖက်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်လိုက်ပြီး…… ” နောက်ထပ်လည်း အန်တီမိုးကို လိုးချင်သေးတယ် ” ” သြော် သားရယ် အန်တီမိုးကလည်း ဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး သားနဲ့အန်တီမိုးက တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူနေနေကျတာလေ သားဆန္ဒရှိတဲ့ အချိန်တိုင်း အန်တီမိုးရဲ့ အခန်းကိုလာ အန်တီမိုး ဆန္ဒရှိရင်လည်း သားအခန်းလာမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား ” လို့ ချစ်စဖွယ်ပြုံးရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောတယ်လေ ….ပြီးပါပြီ။